आज विराट कोहलीको जन्मदिन, को-कोले दिए शुभकामना ? - Everest Dainik - News from Nepal
आज विराट कोहलीको जन्मदिन, को-कोले दिए शुभकामना ?
काठमाडौं, कार्तिक १९ । भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहलीले आज आफ्नो जन्मदिन मनाउँदै छन् । उनले आफ्नो ३०औं जन्मदिन मनाइहेका हुन् । विराट सन् १९८८ मा भारतको राजधानी दिल्लीमा जन्मिएका थिए । अभिनेत्री अनुष्का शर्मासँग विवाह गरेपछि विराटले पहिलो पटकसँगै जन्मदिन मनाइरहेका हुन् ।
उनले अनुष्कासँग गत वर्षको डिसेम्बर ११ मा इटालीमा विवाह गरेका थिए । विराटले यो पटक पत्नीको साथ आफ्नो जन्मदिन उत्तराखण्डको टिहरी गढवाल जिल्लाको नरेन्द्रनगरमा मनाउँदै छन् । जन्मदिन मनाएर उनी लगत्तै दिपावलीका लागि मुम्बई फर्किने छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा जन्मदिनको शुभकामना
याे पनि पढ्नुस विराटले प्रहार गरे शतक, तर पनि हार्‍यो भारत
सामाजिक सञ्जालमा विराटलाई धेरैले जन्मदिनको शुभकामना दिएका छन् । भारतीय कन्ट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई), अन्तर्राष्ट्रि क्रिकेट परिषद् (आईसीसी), भारतीय राष्ट्रिय टिमका पूर्व कम्पतान सचिन तेन्दुलकर, पूर्व क्रिकेटर विरेन्द्र सेहवाग, विनोद कम्बाली, मोहम्मद शामी, मोहम्मद कैफ, रविन्द्र जडेजा, ऋद्धिमान साहा, सुरेश रैना, वीवीएस लक्ष्मण, प्रज्ञान ओझा, केदार जाधवलगायत क्रिकेटरले ट्विटरमार्फत जन्मदिनको शुभकामना दिएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस विराट बने भारतीय टीमको कप्तान
ट्याग्स: Birat Birthday, birat koholi, Indian cricketer